Backgammon🥇 Gali oo ku raaxee Emulator.online
Backgammon: sida loo ciyaaro talaabo talaabo? 💡
Si aad ugu ciyaaro backgammon khadka tooska ah, oo kaliya raac talaabooyinkan tilmaamaha talaabada ah:
Tallaabada 1 . Fur biraawsarkaaga aad doorbidayso oo aad tagto bogga ciyaarta Emulator.online.
Tallaabada 2 . Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gasho websaydhka, ciyaarta ayaa mar hore lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Kaliya guji "In la ciyaaro " oo waxaad bilaabi kartaa ciyaar, dooro inaad la ciyaarto mashiinka ama la ciyaar saaxiib.
Tallaabada 3. Waa kuwan badhamno waxtar leh. Karaa "Ku dar ama ka saar codka", Riix badhanka"ciyaaro"oo bilow ciyaarta, waad awoodaa"Hakad"y"Dib u Bilow"wakhti kasta.
Tallaabada 4. U hel inaad ka saarto dhammaan qaybaha ka horreeya kan kaa soo horjeeda.
Micnaha Backgammon 🙂
Ereyga Backgammon waa magac loo bixiyo ciyaaro ka kooban a loox ka samaysan qaabab iyo midabbo kala duwan, taas oo u baahan inay ahaato abaabulay dusha sare, caadi ahaan loox, sidaa awgeed magaceeda.
Marka loo eego sharciyada, kuwaas oo ka duwan ciyaar kasta, hal ama dhowr qof ayaa ka qaybqaadan kara. In kasta oo cayaaraha qaarkood looga baahan yahay kaqeybgalayaashu in ay adeegsadaan sababaynta istiraatiijiyadeed ama xeeladaysan, iskuduwidda, qalloocnaanta gacanta, xusuusta, awoodda jarista, ama xirfadaha kale, ciyaaraha kale ayaa si fudud u ah fursad saafi ah, guul ama guul darro.
Dabeecaddeeda, cayaaraha guud ahaan kuma lug laha jimicsi, in kastoo qaarkood miiska ku lug leeyihiin oo hawlo ka baxsan banaanka ka fuliyaan. Ciyaaraha guddiga badanaa waxaa loo qaybiyaa qaybo kala duwan iyadoo loo eegayo astaamaheeda gaarka ah.
Kuwani waa qaar ka mid ah tusaalooyinka iyaga ka mid ah.
Kuwa isticmaal laadhuu: Waa ciyaaro in waxay isticmaalaan laadhuu ama qaybo u dhigma iyaga, sida Tauli, Ludo, Parks, Backgammon, Masaska iyo jaranjarooyinka iyo kuwa kale.
Kuwa waxay adeegsadaan astaamo: Iyagana waa la adeegsadaa cayaaraha isticmaala astaamaha sida cunsurka ugu weyn. Tusaalooyinka noocan ah ciyaarta waa sida dino ama mahjong.
Ciyaaraha guddiga: Kuwani waa ciyaaro lagu dhejiyo loox, sida ciyaaraha qoyska ee chess (Chess-ka reer galbeedka, Xiangqi ama Shogi "chess Chinese" ama "chess Japanese", Janggi ama "chess Korea" ama Makruk, oo sidoo kale loo yaqaan "chess Thai"), marwada, Chess-ka Shiinaha, Hnefatafl (Ciyaaraha guddiga qoyska Jarmalka), Mancala (ciyaaraha guddiga qoyska iyo Surrta.
Ciyaaraha casriga ahIn kasta oo aysan si cad u kala soocin waxa loogu yeero "ciyaaraha guddiga", ciyaarahan waxaa sidoo kale loogu yeeraa habkaas sababta oo ah inta badan kiisaska waxay u isticmaashaa muuqaal horumarinta cayaaraheeda. Xaqiiqdii, dunida Baraasiil waxay ugu magacdartay ciyaaro dagaal caan ahaan ereyga "dagaallada dagaal" waa tarjumaad suugaaneed.
Ciyaaraha Ciyaaraha badan: Sidoo kale waa lagu dhejin karaa mararka qaarkood in ka badan seddex ciyaaryahan, laakiin waxay si joogto ah u ciyaaraan labo. Waxaa ka mid ah jciyaaraha kaararka dhaqanka, ama leh sagxad Faransiis ama Isbaanish ah; ama ciyaaraha kaararka sida Hanafuda, oo dhaqan ku ah Japan.
Nooc casri ah oo ganacsi oo kaararka turubka ah, iyagu waa ciyaaraha kaararka la ururin karo sida Sixirka: Ururinta ama Yu-Gi-Oh!.
Waxaa la unkay badhtamihii 1970-naadkii. Waa ciyaaro ay doorkeedu yahay qof kale ayaa sida caadiga ah ciyaartoyda u galiya xaalado gaar ah oo u oggolaanaya inay ku guuleystaan ​​imtixaannada si loo gaaro himilo gaar ah taas ayaa loo fasiray iyaga.
Xaqiiqdii, Astaamaha Backgammon waa doorka ciyaarta ee maahan adeegsiga miiska. Dungeons & Dragons waa nooc gadaal ah oo loo yaqaan 'fantasy heroic', laakiin ugu dhakhsaha badan ayaa ku dhacay suuqa, oo ay ku dhiirrigelisay muuqaalka astaamo kale oo ka tirsan noocyo badan oo kale sida reer galbeedka, jinsiga galmada, sheekooyinka sayniska, opera bannaan, naxdinta gothic, kaftanka, basaasnimada, burcad badeed, iwm
Taariikhda Backgammon 🤓
Magaca Backgammon wuxuu ka yimid ereyga gamen (laga soo bilaabo Ingiriisi dhexe), oo macnaheedu yahay ciyaar.
Ciyaaraha qoyska Backgammon waxay ahaayeen mid ka mid ah ciyaarihii ugu horreeyay ee soo ifbaxa. Intooda badani waxay ku lug leeyihiin rogista laadhuuga ama shay u dhigma sida qolof, iniin, ama caday.
Qoyskan waxaa ku jira dhowr ciyaarood oo caan ah, oo ay ku jiraan Senet (nuqul ka mid ah ciyaarta ayaa laga helay qabriga Tutancamon), Nyout (ciyaarta Kuuriya), Patolli (oo laga yaabo inay tahay ciyaarta ugu jecel Aztecs), Pachisi (ciyaarta qaranka Hindiya, oo leh in ka badan Ludo iyo Chispa) iyo Game of Goose (Ciyaaraha yurub ee caan baxay qarnigii XNUMXaad).
Waa la dhihi karaa Backgammon waa natiijada isbeddelada badan iyo isbeddelada, iyo sidoo kale ciyaaro kale oo badan oo qadiimi ah oo ilaa maanta jira. Asalkiisu wuxuu la xiriiri karaa ilbaxnimooyinkii hore ee Sumer iyo Masar. Golayaal aan la mid ahayn kuwa casriga ah ayaa laga helay qabuuro ku yaal Dooxada Niil ee Masar, iyo sidoo kale hareeraha aasan ee Ur ee Mesopotamia.
Sannadkii 800 ka hor, Beershiya waxaa ka muuqday ciyaar la yiraahdo Nard. Xaqiiqdii Carabtu horay ayey u yaqaaneen ciyaarta, iyo sidoo kale cayaaraha kale, markay qabsadeen Beershiya qarnigii XNUMXaad. Reer Faaris, markooda, waxay ka barteen ciyaarahan Hindus, oo laga yaabo inay ku garanayeen Shiinaha. Laakiin waxay ahayd Carabtii u sara kicisay ciyaarahan heer muhiim ah oo ay ka qoreen buugaagtii ugu horreeyay iyaga. Nard iyo noocyadiisa kaladuwan waxaa laga helaa meelo badan oo Aasiya ah.
Waxay umuuqataa in ciyaarta Nard ay soo bandhigeen Yurubta Carabtu, iskudar ahaanna ciyaarta Tabula waxay keeneen nooc cusub. 30 qaybood ayaa loo adeegsaday sabuurad 24-dhibic ah, dhaqdhaqaaqa waxaa lagu qeexay 2 laadhuu.
Waqti yar gudahood ciyaarta cusubi waxay noqotay mid caan ah, oo la tartameysa chess-ka booska koowaad ee dadka gobta ah, meel markii dambena lagu qabtay ciyaaro kaararka ah.
Qarnigii toddoba iyo tobnaad ayaa soo muuqday nooc kale oo cusub, oo ay weheliso hagaajinta qaybaha, u horseeday dib-u-nooleynta ciyaarta iyo ku faafidda Yurub oo dhan. Wuxuu caan ka noqday England sida Backgammon, Scotland sida Gammon, France sida Trictrac, Jarmalka sida Puff, Spain sida Tablas Reales iyo Italy sida Tavole Reale.
Muddadii isla markiiba ka hor Dagaalkii Labaad ee Adduunka waxaa jiray qandho khamaar. Mid ka mid ah sababaha ayaa ahaa hal-abuurnimo uu sameeyay Mareykan sanadkii 1925, suurtagalnimada in labanlaabo qiimaha dhibcaha la ciyaaray. Laakiin markale, ciyaarta ayaa hoos u dhacday.
Sanadihii 1970-naadkii, lama filaan ah, caan noqday markale, ilaa heer ay maanta fududahay in la helo si loo iibsado labada qaybood iyo buugaag. Bariga Dhexe, Trictrac waxay ilaalisay caannimadeeda waxaana si aad ah loogu ciyaaraa Lubnaan iyo wadamada deriska la ah.
Waxyaabaha lagu ciyaaro Backgammon💡
Si aad u ciyaarto Backgammon, waxaad ubaahantahay 2 kaqeybgalayaal, loox gadaal ka riixaya, 15 marmar oo madow, 15 marmar cad iyo laba nooc oo laadhuug ah oo 6-dhinac ah, oo leh 24 guryo saddex geesood ah oo laga soo uruuriyay 6 ilaa 6 loona qaybiyay 4 qaybood.
Ciyaartoyda - 2
Qaybaha ama dhagaxyo - 15 madow, 15 cad
Guddi - 24 guri oo midabbo isku dhejisan oo loo qaybiyay 6 ilaa 6 loona qaybiyay 4 qaybood
Ujeeddo: Ka tirtir dhammaan dusha kaararka sabuuradda horteeda ka soo horjeedka.
Xeerarka ciyaarta Backgammon📏
Halkan waa a soo koobid deg deg ah ee xeerarka Backgammon:
Calan ciyaaryahanka ugu horeeya adigoo rogaya laadhuu
Dhaqaaq qaybaha iyada oo ku saleysan qiimayaasha laga soo qaatay xogta
Sinnaanta xogta waxay u oggolaaneysaa dhaqdhaqaaq laba jibbaaran
Lama oggola in la geeyo qaybahaaga in ka badan laba qaybood oo iska soo horjeeda
Haddii guriga la bartilmaameedsanayo uu leeyahay hal cad oo ka soo horjeeda oo keliya, waa la qaban karaa
Ka bilow qaybahaaga ka saar sabuuradda markay dhammaantood ku jiraan rubuca ugu dambeeya
Ciyaarta dib-u-heshiisiinta waa ciyaar dhaqameed dhaqameed, halkee guuleystaha ayaa ah kan maareeya inuu ka saaro dhammaan xubnihiisa marka hore guddiga.
Laakiin haddii aad u baahan tahay inaad wax akhrido xeerarka oo dhameystiran, Iyaga hoos ayaan uga tagnay.
Qeexitaanka ciyaaryahanka koowaad
Kahor intaadan bilaabin dhaqdhaqaaqa qaybaha waa lagama maarmaan qeex yaa noqon doona ciyaartooy uu ciyaaro.
Si loo qeexo cidda bilaabeysa ciyaarta dib u soo celinta, ciyaaryahan kasta waa inuu rogaa 1 dhinto. Qof kasta oo hela qiimaha ugu sarreeya ayaa noqon doona kan ugu horreeya ee ciyaara. Haddii ay dhacdo isku dheelitir, laadhuuga ayaa mar kale la sii daayaa illaa iyo inta ciyaaryahanka ugu horreeya la qeexayo. Kuwa dambe waa inay qaadaan tallaabada ugu horreysa, iyagoo adeegsanaya qiimaha laadhuuga ay marka hore ciyaari lahaayeen.
Tusaale: Ciyaaryahan A ayaa duubaya dhimasha wuxuuna helayaa qiimaha 5; Ciyaaryahan B wuxuu duuduubayaa dhimasha wuxuuna helayaa qiimaha 5 sidoo kale; Ciyaaryahan A ayaa soo rogaya mar kale hadana wuxuu helayaa qiimaha 4; Ciyaaryahan B wuxuu duuduubayaa dhimasha wuxuuna helayaa qiimaha 6; Ciyaaryahan B ayaa noqon doona kan ugu horeeya ee ku ciyaara qiyamka laadhuu 4 iyo 6
Dhaqdhaqaaqa qaybaha 🧩
Ka dib marxaladda qeexida cidda bilaabeysa ciyaarta gadaal dambe, ciyaaryahan kasta, markiisa, waa inuu duub 2 laadhuu oo kala dhaqaaji qaybahaaga sida ku xusan qiyamka xogta.
Ciyaaryahan kasta had iyo jeer googooyo dhaqaaji hal jiho, mid u jeedo dhinaca kale midna dhinaca bidix.
Haddii ciyaaryahanka hadda uusan sameyn karin dhaq dhaqaaqyo sax ah oo leh qiimayaasha laga helay laadhuuga, kan dambe ayaa dhaafi doona markiisa.
Guriga bartilmaameedka ah ee gabal waligiis ma noqon karo mid horey u lahaa 2 ama ka badan qaybo ka soo horjeeda. Haddii guriga la bartilmaameedsanayo uu leeyahay kaliya 1 gabal oo iska soo horjeeda, waa la qabtay, wuxuu ka tagayaa guddiga wuxuuna aadayaa "bar".
Marka ciyaaryahan uu haysto hal ama dhowr xabbadood oo la qabtay, wuxuu sameyn karaa oo keliya samatabbixinta, taasi waa, dhaqdhaqaaqyo kaa qaadaya qaybaha aad soo qabatay baarka oo aad ku xajisid guri, marwalba adeecda sharciga ah in guriga bartilmaameedka uusan ka koobnaan karin wax ka badan 1 gabal oo iska soo horjeeda.
Haddii ciyaartoy isku rogo isla qiimihiisa labadiisa laad, wuxuu xaq u leeyahay inuu 2 dhaqdhaqaaq ku sameeyo qiimaha laadhuu halkii uu ka dhaqaajin lahaa 4 dhaqaaq ee caadiga ah.
Ka goynta qaybo ka mid ah sabuuradda
Ciyaaryahanku wuxuu bilaabi karaa oo kaliya inuu qaybo ka mid ah ka saaro sabuuradda Backgammon markay dhammaantood ku jiraan rubuca hoose (sidoo kale loo yaqaan qaybta gudaha). Si loo gooyo gabal, ciyaartoygu waa inuu soo rogaa qadarka u dhigma tirada laba jibbaaranaha ee hadhaaga laadhuuga ku jira. Haddii aad hesho qiimo ka sarreeya inta aad ugu baahan tahay qaybaha ugu fog, waa inaad ka saartaa qaybahaas. Tusaale: Haddii qaybaha ugu fog ay u baahan yihiin 4 in laga saaro isla markaana uu ciyaartoygu qaato 6, wuxuu ka saari karaa sabuuradda midkood.
Ku guuleystaha ciyaarta ayaa ah ciyaaryahanka ka qaada dhamaan xubnihiisa wixii ka horreeya kan ka soo horjeeda.
Tilmaamaha lagu ciyaaro Backgammon🤓
Iska ilaali inaad hal xabbo oo keliya uga tagto guryaha
Haddii aad u baahato inaad gabal keligood iskaga tagto, iskuday inaad ka fogeyso qaybta cadowga
Ka dhig gurigaaga ugu dambeeya qofka kaa soo horjeeda xir
La wareeg guryo badan intii suurtogal ah